Ihe kpatara gị na onye ahịa gị kwesịrị isi mee ihe dị ka di na nwunye lụrụ na 2022 | Martech Zone
Ihe kpatara gị na onye ahịa gị kwesịrị iji mee ihe dị ka di na nwunye lụrụ na 2022
Tuesday, February 8, 2022 Tuesday, February 8, 2022 Gregg Ames
Njide ndị ahịa dị mma maka azụmahịa. Ịzụlite ndị ahịa bụ usoro dị mfe karịa ịdọta ndị ọhụrụ, na ndị ahịa nwere afọ ojuju nwere ike ịzụrụ ihe ugboro ugboro. Ịnọgide na-enwe mmekọrịta siri ike nke ndị ahịa ọ bụghị nanị na-erite uru n'ala ala ụlọ ọrụ gị, ma ọ na-ewepụkwa ụfọdụ mmetụta sitere na ụkpụrụ ọhụrụ na nchịkọta data dịka. Mmachibido iwu kuki ndị ọzọ nke Google na-abịa.
Mmụba 5% na njide ndị ahịa dabara na ọ dịkarịa ala mmụba 25% na uru)
AnnexCloud, ọnụ ọgụgụ njide ndị ahịa 21 dị ịtụnanya maka 2021
Site n'ijide ndị ahịa, ụdị nwere ike ịga n'ihu na-emepụta data nke mbụ bara uru, (dabere na otu ndị na-azụ ahịa ha si emekọrịta na iji ngwaahịa ha) nke enwere ike iji hazie mmekọrịta dị n'ọdịnihu na ndị ahịa dị adị na atụmanya. Ihe kpatara ya bụ, na 2022, ndị na-ere ahịa ga-elekwasị anya karịa n'ịkwado na ịzụlite mmekọrịta ndị ahịa dị ugbu a, dịka otu gị na onye òtù ọlụlụ gị ga-esi.
Ịbụ na mmekọrịta na-elebara anya na nlebara anya - ị naghị eleghara onye òtù ọlụlụ gị anya ozugbo mmekọrịta ahụ malitere. Ịzụta onye òtù ọlụlụ gị chọkọletị ma ọ bụ okooko osisi ọkacha mmasị ha dị ka iziga onye ahịa email ahaziri onwe ya - ọ na-egosi na ị na-eche banyere ha na mmekọrịta nke gị abụọ na-ekerịta. Ka ị na-agbasi mbọ ike na oge ị dị njikere itinye n'iwulite mmekọrịta ahụ, otú ahụ ka akụkụ abụọ ahụ nwere ike inweta site na ya.
Ndụmọdụ maka idowe ndị ahịa gị
Nọgidenụ na-amata ibe unu. A na-ewulite mmekọrịta na ntọala siri ike, ya mere, ime na idobe echiche dị mma nwere ike ịdị ezigbo mkpa.
Onodu ugboelu - Ịmepụta mgbasa ozi ịzụlite onboarding, ebe ị na-emeghe ahịrị nkwurịta okwu ozugbo, na-enyere aka guzobe azụmahịa gị dị ka onye mmekọ, ọ bụghị naanị onye na-ere ndị ahịa ọhụrụ gị. Usoro nzikọrịta ozi a na-enye gị ohere ngwa ngwa na ntụkwasị obi na nzaghachi gị mgbe onye ahịa na-abịakwute gị ajụjụ ma ọ bụ okwu, nke dị mkpa iji wulite ntụkwasị obi. Ikwesịrị iji ya wee banye wee nweta nzaghachi ọ bụla ha nwere ka i wee nwee ike melite ahụmịhe ha nke ọma. E kwuwerị, nkwurịta okwu bụ isi na mmekọrịta.
Ahịa ahia - Nweta akpaaka ahịa ahịa. Automation ahịa ọ bụghị naanị na-eme ka usoro nzụlite dị mfe, ọ nwekwara ike inyere gị aka ịchịkọta na itinye data bara uru gbasara ndị ahịa gị. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịbanye na nghọta gụnyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha nwere ike ịmasị ha, ka ha si eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ha chọgharịala weebụsaịtị gị. Data a na-enye ndị ahịa ohere ịchọpụta ngwaahịa ma ọ bụ ndị ahịa ọrụ kwesịrị na-eji, na-enye ha ohere ịkpasu ndị ahịa ha iwe site n'igbo mkpa ha. Dị nnọọ ka ị na-aṅa ntị na onye òtù ọlụlụ gị ịtụ anya ihe ha nwere ike ịchọ ma ọ bụ mkpa, otu ihe ahụ kwesịrị ime maka ndị ahịa gị, ebe ọ na-emepe ụzọ maka uru ndị ọzọ.
SMS Marketing - Jiri SMS ahịa gaa ekwentị. Ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya na ahịa SMS na-arị elu na igwe ekwentị nke ukwuu taa. Ịre ahịa mkpanaka na-enye ụlọ ọrụ ọkpọkọ ozugbo n'aka onye ahịa, ma na-anọchite anya ụzọ dị irè isi nyefee ozi dị mkpa na mkpa. Ozi SMS nwere ike ịnwe azụmahịa nkwado, ndetu ekele ndị ahịa, nyocha, ọkwa na ihe ndị ọzọ, ihe niile iji mee ka onye ahịa tinye aka na obi ụtọ. Dị nnọọ ka ị na-elele na nwunye gị ma ọ bụ na-ekere òkè nkọwa nke ụbọchị gị site SMS, ị kwesịrị ị na-ekere òkè ozi na gị ahịa kwa, site a ọwa na-arụ ọrụ nke ọma na irè.
Ụdị ndị na-eji teknụzụ na-emepụta njikọ miri emi n'etiti ndị ahịa ha, na-enye uru mgbe niile site na ozi ahaziri iche, ma na-ejigide ahịrị nkwurịta okwu mepere emepe ga-ewulite mmekọrịta bara uru n'etiti ndị ahịa ha. Ka mmekọrịta dị n'etiti abụọ ahụ na-esiwanye ike, otú ahụ ka onye ọ bụla nwere ike isi na ya pụta - dị ka mmekọrịta gị na onye òtù ọlụlụ gị.
Tags: mee ihemee ihe na ngwanrọNa-aga n'ihumgbakwunyemmekọrịta ndị ahịanjigide ndị ahịammekọrịta ndị na-ere ahịaakụrụngwa ahịateknụzụ ahịankataonye na-ere martechahịa efuịnyịnyakeonweSMS ahịaederede ederede ahiakuki ndị ọzọ
Gregg Ames Tuesday, February 8, 2022 Tuesday, February 8, 2022
Gregg Ames bụ onye isi ọrụ azụmaahịa na Iwu-Na Software, ikpo okwu akpaaka ahịa na-eto eto na Portland, Oregon. N'ọrụ ya, ọ bụ ya na-ahụ maka atụmatụ ịre ahịa nke Act-On na nke zuru oke. Gregg na-enwe mmasị n'ịkọpụta na ịnye ahụmịhe ndị ahịa dị elu nke na-amasị onye ọrụ njedebe. Ọ na-eweta ihe karịrị afọ 25 nke ahụmahụ na ụlọ ọrụ SaaS na MarTech, na-arụ ọrụ dị elu na Oracle, Kibo Commerce, Conversica, na Turning.
Brax: Mepụta, bulie elu, ma hazie mgbasa ozi ala nna gị site na otu dashboard
Gleam: Ngwa ahịa e mere ka ọ too azụmahịa gị